अनलाइन डेटिङ गर्नुहुन्छ ? यी ८ कुरा विचार गर्नुस् « अर्थबजार – आर्थिक विकासको लागि सञ्चार
अनलाइन डेटिङ गर्नुहुन्छ ? यी ८ कुरा विचार गर्नुस्
८ चैत्र २०७३, मंगलवार ०५:४७
एजेन्सी । अहिलेको विश्व इन्टरनेटको जालोमा बेरिएको छ । इन्टरनेटको प्रयोगले मानिसलाई विश्वका हरेक कुनाको अवस्ताबारे जानकारी दिनुका साथै हरेक ठाऊँका मानिससँग मित्रता समेत गास्ने मौका दिएको छ । मानिसहरू इन्टरनेटबाटै साथी बन्ने, प्रेम गर्ने र विबाह गर्ने सम्मका काम समेत गर्न थालिसकेका छन् । हुँदा हुँदा मानिसहरू डेटिङ समेत अनलाइनबाट नै गर्न थालिसकेका छन् । इन्टरनेटबाटै डटिङ गर्नका लागी मानिसहरूले विभिन्न खाले वेबसाइटहरू खोल्ने गर्छन् जसमा डेटिङ गर्न सकियोस् । डेटिङ गर्नका लागी कहिलेकाँही मानिसहरू यति उत्साहित हुन्छन् की उनीहरुले कोसँग र कसरी डेटिङ गरिरहेका छन् ती कुरा पनि विचार गर्दैनन् र डेटिङ गर्ने क्रममा उनीहरूलाई हुन सक्ने हानीका बारेमा समेत धेरै अनभिज्ञ हुने गरेका छन् ।
प्रकाशित : ८ चैत्र २०७३, मंगलवार ०५:४७